एक पोडकास्ट होस्टिंग, सिंडिकेशन, पदोन्नति चेकलिस्ट | Martech Zone
मंगलवार, नोभेम्बर 9, 2021 सोमबार, नोभेम्बर 22, 2021 थॉमस ब्रोडबेक
पछिल्लो वर्ष वर्ष थियो पोडकास्टि popularity लोकप्रियतामा विस्फोट भयो। वास्तवमा, १२ बर्ष भन्दा माथि उमेरका अमेरिकीहरूले भनेका छन् कि उनीहरूले गत महिनामा पोडकास्ट सुनेका थिए, जुन वर्षौं बर्ष लगातार बढेको छ २०० 12 मा १२% सेयर बाट र म यो संख्या बढिरहेको देख्दछु।
त्यसोभए के तपाईंले आफ्नो पोडकास्ट सुरु गर्ने निर्णय गर्नुभयो? ठिकै छ, पहिले विचार गर्न केहि चीजहरू छन् - जहाँ तपाईं तपाईंको पोडकास्ट होस्ट गर्नुहुन्छ र कहाँ तपाईं यसलाई बढावा दिनुहुन्छ। तल मैले केहि सुझावहरू र पाठहरू सूचीबद्ध गरें जुन हाम्रो पोडकास्ट प्रचार गर्नबाट सिकेका छन् वेबको किनारा, त्यसैले म आशा गर्दछु कि ती तपाईंको लागि उपयोगी हुनेछन्!
पोडकास्टिंग कार्यशाला र प्रस्तुतीकरण
मैले हालसालै इन्टर्प्राइज पोडकास्टर्सको लागि उनीहरूको पोडकास्टहरू सिन्डिकेट गर्न र प्रमोट गर्न विशिष्ट रणनीतिहरू तैनाती गर्न एक कार्यशाला विकसित गरें। हामीले यी धेरै विधिहरूसँग डेल ल्युमिनरीज पोडकास्ट, सबै व्यवसाय पोडकास्टहरूको शीर्ष १% मा धकेल्दै।
तपाईंको पोडकास्ट कहाँ होस्ट गर्ने
कुनै पनि डाइरेक्टरीहरूमा वितरण गर्नु भन्दा पहिले तपाईले निर्णय गर्नुपर्नेछ कि कहाँ हुनुहुनेछ पाहुना तपाईंको पोडकास्ट। तपाइँको पोडकास्ट होस्टिंग निर्णय धेरै मा निर्भर गर्दछ जहाँ तपाइँ तपाइँको पोडकास्ट सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ किनभने केहि डाइरेक्टरीहरूसँग अरूसँग निश्चित सम्बन्धहरू छन्। हाम्रो पोडकास्टका लागि, वेबको धार, हामी लिब्सिनसँग होस्ट गर्छौं र यो वरपरका लोकप्रिय होस्टहरू मध्ये एक हो।
तपाइँको पोडकास्ट एक सामान्य वेब होस्ट वा तपाइँको हालको वेबसाइटमा होस्ट नगर्नुहोस्। पोडकास्ट होस्टिंग वातावरणमा ठूला अडियो फाईल स्ट्रीम स्ट्रीम र वेबबाट डाउनलोडको लागि पूर्वाधार निर्माण हुन्छ। सामान्य वेब होस्टिंग वातावरणले सुन्न अवरोधहरू निम्त्याउन सक्छ र ब्यान्डविथको उपयोगमा ओभररेज लागतको साथ तपाईंको पैसा पनि खर्च गर्न सक्दछ।
Martech Zoneको सिफारिश मा होस्ट गर्न को लागी छ ट्रांजस्टर। तपाईं को सिंहावलोकन पढ्न सक्नुहुन्छ पोडकास्ट प्लेटफर्म यहाँ, तर छोटकरीमा, यो प्रयोग गर्न सजिलो छ, असीमित शो होस्टिङ छ, र सहयोग र व्यापारको लागि केही उत्कृष्ट उपकरणहरू छन्।
ट्रान्जिस्टरको 14-दिनको नि:शुल्क परीक्षणको लागि साइन अप गर्नुहोस्
तपाईंले प्रयोग गर्न सक्नुहुने केहि अन्य पोडकास्ट होस्टिंग कम्पनीहरू हुन्:
Acast - पोडकास्ट खोज, सुन्ने, होस्टिंग, र आरएसएस वितरण।
एङ्कर - असीमित एपिसोडहरू सिर्जना र होस्ट गर्नुहोस्, तपाईंको शो जताततै वितरण गर्नुहोस्, र पैसा कमाउनुहोस्। सबै एकै ठाउँमा, सबै नि: शुल्कका लागि।
अडियोबूम - समर्पित श्रोताहरूमा पुग्नुहोस् र पोडकास्टिंगमा शीर्ष प्रतिभाबाट डाईनामिक विज्ञापन प्रविष्टिहरू र समर्थनहरूको माध्यमबाट तपाईंको ब्रान्ड सन्देश डेलिभर गर्नुहोस्।
ब्लब्री - Blubrry.com एक पोडकास्टिंग समुदाय र निर्देशिका हो जसले सिर्जनाकर्ताहरूलाई पैसा कमाउन, विस्तृत श्रोताको मापन प्राप्त गर्न र तिनीहरूको अडियो र भिडियो होस्ट गर्ने शक्ति प्रदान गर्दछ। चाहे तपाईं मिडिया निर्माता, विज्ञापनदाता वा मिडिया उपभोक्ता हो, ब्ल्ब्र्री तपाईंको डिजिटल मिडिया इन्टरफेस हो।
बजस्प्राउट - आज पोडकास्टिंग होस्टिंगबाट नि: शुल्क सुरू गर्नुहोस् बजस्प्राउट, होस्टिंग, प्रचार, र तपाईंको पोडकास्ट ट्र्याक गर्नको लागि सबैभन्दा सजिलो पोडकास्टि software सफ्टवेयर।
कास्ट गरिएको - होस्टिंग र कार्यतालिकाबाट सक्रियता र एनालिटिक्स सम्म, कास्टेड भ्वाईस B2B मार्केटरहरूको लागि सामग्री व्यवस्थापन मञ्च हो।
फायरराइड - एक सुन्दर प्रयोगकर्ता इन्टरफेसको साथ एक अद्वितीय पोडकास्ट होस्ट जसले तपाइँको पोडकास्टको साथ वेबसाइट दुवै समावेश गर्दछ।
Libsyn - लिब्सिनले तपाईंको पोडकास्टलाई चाहिने सबै प्रदान गर्दछ: प्रकाशन उपकरणहरू, मिडिया होस्टिंग र डेलिभरी, आईट्यून्सका लागि आरएसएस, एक वेब साइट, तथ्या ,्क, विज्ञापन कार्यक्रम, प्रीमियम सामग्री, एप्पल, एन्ड्रोइड र विन्डोज उपकरणहरूको लागि अनुप्रयोग।
मेगाफोन - तपाईंको पोडकास्ट व्यवसाय प्रकाशित गर्न, मुद्रीकरण गर्न र मापन गर्न उपकरणहरू।
ओम्नी स्टुडियो - ओम्नी स्टूडियो एक उद्यम पोडकास्टिंग समाधान हो कि एक अनलाइन सम्पादक, मुद्रीकरण, प्रसारण क्याप्चर, रिपोर्टिंग, र अन्य सुविधाहरूको एक होस्ट समावेश छ।
पोडबीन - अल्ट्रा साधारण पोडकास्ट प्रकाशन समाधान। असीमित ब्यान्डविथ र भण्डारण। पोडकास्टरले तपाईंको पोडकास्टलाई होस्ट, प्रोमोट र ट्र्याक गर्न आवश्यक सबै कुरा।
सिम्पलकास्ट - तपाईंको पोडकास्टहरू सजिलो तरीकाले प्रकाशित गर्नुहोस्।
SoundCloud - साउन्डक्लाउडमा पोडकास्टिंगले कसैलाई पनि कथाहरू भन्न, अपलोड गर्न, र साझेदारी गर्न सजिलो बनाउँदछ। विश्वको सबैभन्दा स्थिर र सहज अडियो होस्टिंग प्लेटफर्ममा तपाईंको समुदाय बनाउनुहोस्।
Spreaker - Spreaker सँग यो सबै छ! तपाईंको खाता सेट अप गर्नुहोस् र पोडकास्टहरू रेकर्ड गर्न तयार हुनुहोस् वा तपाईंको कम्प्युटर वा मोबाइल उपकरणबाट लाइभ रेडियो कार्यक्रम होस्ट गर्दछ।
पोडकास्ट जेट - प्रीमियम पोडकास्ट होस्टिंग: त्वरित र अनुकूलन डेलिभरी।
तपाईंको पोडकास्ट होस्टिंग सेट अप गरेपछि, तपाईंसँग एक मान्य RSS फिड हुनु आवश्यक छ। धेरै चोटि जब तपाईं पोडकास्ट होस्टिंग खाता सेट अप गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंले केही याद गर्नुहुनेछ जुन RSS फिडलाई बिच्छेद गर्दछ। कुनै पनि डाइरेक्टरीमा पेश गर्नु अघि, तपाईंले आफ्नो RSS फिड मान्य छ कि भनेर जाँच गर्न आवश्यक पर्दछ। तपाईंको RSS फिड परीक्षण गर्न, प्रयोग गर्नुहोस् कास्ट फिड प्रमाणीकरणकर्ता तपाईंले कुनै गल्ती गर्नुभयो कि भनेर हेर्न। यदि तपाईंसँग मान्य फिड छ, भने तपाईंको डाइरेक्टरी सबमिशनमा हाल्नुहोस्।
जहाँ तपाईंको पोडकास्ट सिंडिकेट गर्न
साइड नोट: कुनै पनि उपलब्ध डाईरेक्टरीहरूमा तपाईंको पोडकास्ट बुझाउनु अघि, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं आफ्नो आरएसएस फिडमा एक भन्दा बढि पोडकास्ट एपिसोड राख्नुहोस्। तपाईं केवल एक पोडकास्टको साथ धेरै डाइरेक्टरीहरूमा बुझाउन सक्नुहुनेछ, तर तपाईंको पोडकास्टलाई प्रायः श्रोताहरूको लागि, उनीहरूले तपाईंको कार्यक्रमको सदस्यता लिनु अघि एपिसोड भन्दा बढी हेर्न चाहन्छन्।
किनभने आईफोन र Android उपकरणहरूले मोबाइल बजारमा प्रभुत्व जमाउँछन्, यी पहिलो दुई दर्ताहरू प्रत्येक पोडकास्टका लागि आवाश्यक हुन्छन्!
आइट्यून्स - तपाईंले आफ्नो आरएसएस फिड सिर्जना गरेपछि, पोडकास्टलाई आईट्यून्समा बुझाउनु तपाईंको पहिलो चरण हुनुपर्छ। आइट्यून्ससँग पोडकास्टरहरूको लागि श्रोताको सबैभन्दा लोकप्रिय नेटवर्कहरू छन्। तपाईसँग पहिले एप्पल आईडी हुनु आवश्यक छ, यदि तपाईसँग आईफोन पहिले नै छ भने तपाईसँग आईडी हुनु पर्छ। यसमा साइन इन गर्नुहोस् आईट्यून्स पोडकास्ट तपाईंको एप्पल आईडीको साथ कनेक्शन पृष्ठ र URL फिल्डमा तपाईंको आरएसएस फिड पेस्ट गर्नुहोस् र तपाईंको शो सबमिट गर्नुहोस्। तपाईंको खातामा निर्भर गर्दै, यो एकदम चाँडै स्वीकृत हुन सक्छ वा केही दिन लिन सक्दछ। एक पटक तपाईले आइट्यून्समा स्वीकार प्राप्त गर्नुभयो, तपाईको शो अन्य धेरै पोडकाचर्समा स्वचालित रूपमा देखा पर्नेछ किनभने ती उपकरणहरूले आइट्युनहरूबाट उनीहरूको फिडहरू पाउनेछन्। दुर्भाग्यवस, आइट्यून्सको साथ तपाईले कुनै पनि पाउनु हुने छैन विश्लेषण तपाईंको खातासँग सम्बन्धित।
आइट्यून्सको साथ तपाईंको पोडकास्ट दर्ता गर्नुहोस्
गुगल पोडकास्ट प्रबन्धक - गुगलले तपाईंको पोडकास्ट श्रोताहरूको निगरानीको लागि केहि उत्कृष्ट विश्लेषकहरूको साथ एक प्लेटफर्म जारी गर्‍यो। तपाईं नाटकहरूको संख्या देख्न सक्नुहुनेछ, पहिलो days० दिनमा नाटकहरू, औसत अवधि, र त्यसपछि समयसँगै प्रदर्शन निगरानी गर्नुहोस्। गुगल खाताबाट साईन ईन गर्नुहोस्, र निम्न चरणहरूका अनुसरण गर्नुहोस् तपाईंको पोडकास्ट थप्नुहोस्.
गुगलको साथ तपाईंको पोडकास्ट दर्ता गर्नुहोस्
पेंडोरा - पाण्डोरा एक विशाल दर्शकको रूपमा जारी छ र पूर्ण रूपमा पोडकास्टहरू समर्थन गर्दछ, यसको अनुगमन गर्ने क्षमताको साथ पनि।
पाण्डोराको साथ तपाईंको पोडकास्ट दर्ता गर्नुहोस्
Spotify - स्पोटिफाइले अडियो सामग्रीमा विस्तार गर्न जारी राख्दछ, र एch्करको खरीदको साथ, मध्यम स्वामित्वमा गम्भीर उद्देश्य लिइरहेको छ। धेरै प्रयोगकर्ताहरूको साथ, तपाईं हराउन चाहनुहुन्न!
स्पोडिफाइको साथ तपाईंको पोडकास्ट दर्ता गर्नुहोस्
अमेजन - अमेजन संगीत एक सापेक्ष नयाँ आगमनकर्ता हो तर श्रव्य, प्राइम, र अलेक्साको आवाज सहायक पुग्नको साथ, तपाईंले यो महत्त्वपूर्ण च्यानल छोड्नुहुन्न।
अमेजन संगीत संग तपाईंको पोडकास्ट दर्ता गर्नुहोस्
वैकल्पिक रूपमा, तपाईं आफ्नो पोडकास्ट यी उपकरणहरू र डाइरेक्टरीहरूसँग तपाईंको पहुँच विस्तार गर्नका लागि दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ:
Acast - यदि तपाईंको पोडकास्ट अर्को प्रदायकमा होस्ट गरिएको छ भने, तपाईं आफ्नो पोडकास्ट एक नि: शुल्क स्टार्टर खाताको साथ दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको पोडकास्टलाई एक्स्ट्याटमा थप्नुहोस्
कुनै पनि पोड - AnyPod अमेजन एलेक्सा संचालित उपकरणहरु को लागी एक लोकप्रिय कौशल हो।
कुनै पोडमा तपाईंको पोडकास्ट थप्नुहोस्
ब्लब्री - ब्लब्री 350,000 XNUMX,००० पोडकास्ट सूचीबद्ध सहित इन्टरनेटमा पनि सबैभन्दा ठूलो पोडकास्ट डाइरेक्टरी हो। तिनीहरू पनि पोडकास्टरहरूको लागि विज्ञापन र अन्य सेवाहरू प्रदान गर्दछ.
नि: शुल्क ब्लुब्ररी खाता बनाउनुहोस् र तपाईंको पोडकास्ट थप्नुहोस्
ब्रेकर - ब्रेकर तपाईंको पोडकास्टहरू बेच्न र प्रमोट गर्न बजार हो। तिनीहरूको अनुप्रयोग एकदम राम्रो छ, र तपाईंको पोडकास्टको सामाजिक साझेदारीलाई विशेष गरी उपयोगी बनाउँदछ।
तपाईंको पोडकास्ट ब्रेकरमा जडान गर्नुहोस्
कास्टबक्स - कास्टबक्स कास्टबक्स क्रिएटर स्टुडियो प्रदान गर्दछ, शक्तिशाली पोडकास्टिंग एनालिटिक्सको साथ उपकरणहरूको एक सेट ताकि तपाईं मापन गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको ग्राहकहरूसँग स engage्लग्न गर्न साथै स्ट्रिम गर्न सक्नुहुनेछ र डाउनलोड प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको पोडकास्टलाई कास्टबक्समा सबमिट गर्नका लागि निर्देशनहरू
iHeartRadio - लागि iHeartRadioयो त्यहि हो जहाँ यसले Libsyn लाई तपाइँको होस्टको रूपमा भुक्तान गर्दछ। उनीहरूको iHeartRadio सँग सम्बन्ध छ र तपाईं आफ्नो लिब्सिन खाता सेट अप गर्न सक्नुहुनेछ स्वचालित रूपमा सिर्जना गर्न र आफ्नै च्यानल बनाउनको लागि। यो सेटअप गर्न, तपाईंको खातामा "गन्तव्यहरू" ट्याब अन्तर्गत, "नयाँ थप्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि iHeartRadio स्ट्रिम सेट अप गर्न निर्देशनहरूको पालना गर्नुहोस्। नोट: तपाईको पोडकास्टलाई iHeartRadio मा पेश गर्न सक्नु अघि लिब्सिन भित्र दुई महिना भन्दा बढी सक्रिय हुन आवश्यक पर्दछ।
तपाईंको पोडकास्ट iHeartRadio मा बुझाउनुहोस्
मेघाच्छादित - यदि तपाईंको पोडकास्ट पहिले नै आईट्यून्समा छ भने, यो ओभरकास्टमा एक दिन भित्र देखा पर्नेछ। यदि यो होईन भने, तपाईं यसलाई मैन्युअल्ली थप्न सक्नुहुन्छ:
म्यानुअल रूपमा तपाईंको पोडकास्टलाई ओभरकास्टमा थप्नुहोस्
जेब - एक वेब-आधारित र मोबाइल अनुप्रयोग जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उपकरणहरू भर व्यवस्थित गर्न र सुन्न सक्षम गर्दछ। मार्फत तपाईंको पोडकास्ट बुझाउनुहोस् पकेट कास्टहरू सबमिट गर्नुहोस् पृष्ठ।
तपाईंको पोडकास्ट जेब क्याट्समा पेस गर्नुहोस्
पोडचेसर - पोडकास्ट डाटाबेस र खोज उपकरण। तिनीहरूको लक्ष्य भनेको तपाईंलाई मनपर्ने पोडकास्टहरूको बारेमा प्रतिक्रिया दिन सजिलो बनाउँदछ र पोडकास्टहरू सजिलै पत्ता लगाउँदछ। पोडचेसरमा तपाईंको पोडकास्ट फेला पार्नुहोस् र तपाईं आफ्नो पोडकास्ट फिडमा पंजीकृत ईमेल प्रयोग गरेर दावी गर्न सक्नुहुन्छ।
Podchaser मा तपाइँको पोडकास्ट दावी गर्नुहोस्
पोडक्निफ - पोडक्निफ पोडकास्टहरूको एक अनलाइन निर्देशिका हो जुन पोडकास्टहरू शीर्षक र स्थान द्वारा आयोजना गर्ने ठूलो कार्य गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरू समीक्षा गर्न र मनपर्ने आफ्नो मनपर्ने पोडकास्टहरू पनि गर्न सक्दछन्। एकचोटि तपाईंले दर्ता गर्नुभयो र लगईन गर्नुभयो भने, तपाईंलाई मेनूमा सबमिशन लिंक भेट्नुहुनेछ।
पोडक्निफका लागि दर्ता गर्नुहोस्
रेडियोपब्लिक - रेडियोपब्लिक एक स्वस्थ, स्केलेबल, र आर्थिक रूपले टिकाऊ पोडकास्ट सुन्ने प्लेटफर्म पोडकास्टरहरू कुर्दै छन्। हामी श्रोताहरूलाई पोडकास्ट निर्माताहरू discover तपाइँलाई फेला पार्न, मद्दत गर्न र आर्थिक इनाम दिन मद्दत गर्दछौं। तपाईंको दर्शकहरूसँग आज जडान सुरु गर्न रेडियोपब्लिकमा तपाईंको कार्यक्रम प्रमाणित गर्नुहोस्।
रेडियोपब्लिकमा तपाईंको पोडकास्ट दावी गर्नुहोस्
स्टिचर - व्यक्तिगत रूपमा, स्टिचर मेरो मनपर्ने पोडकास्ट अनुप्रयोग हो। मेरो पोडकास्ट सबै सुन्ने यस अनुप्रयोग मार्फत गरियो। स्टिचर एक नि: शुल्क अनुप्रयोग हो र and 65,000,००० भन्दा बढी रेडियो कार्यक्रमहरू र पोडकास्टहरू उपलब्ध छन्। तपाईंको पोडकास्ट सबमिट गर्न, तपाईंले एक पार्टनरको रूपमा साइन अप गर्न आवश्यक छ। तपाईंको शो तथ्या .्क पार्टनर पोर्टलमा पनि उपलब्ध छन्।
स्टिचरमा तपाईंको पोडकास्ट थप्नुहोस्
TuneIn - TuneIn अर्को नि: शुल्क निर्देशिका छ तपाइँ आफ्नो पोडकास्ट सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको पोडकास्ट बुझाउन, तपाईंले उनीहरूको फारम भर्नु आवश्यक पर्दछ। तपाईंसँग TuneIn को साथ खाता छैन जस्तै तपाईं अन्य निर्देशिकाहरूको साथ हुनेछ। त्यसो भए, यदि तपाईंलाई तपाईंको फिडमा केहि पनि अपडेट गर्न आवश्यक छ भने, तपाईंले फेरि यो प्रक्रिया मार्फत जानुपर्नेछ। TuneIn सँग अमेजन स्किल पनि छ जहाँ तपाईंको पोडकास्ट एलेक्सा द्वारा संचालित उपकरणहरू मार्फत खेल्न सकिन्छ!
TuneIn मा तपाईंको पोडकास्ट थप्नुहोस्
Vurbl - सबै प्रकारका अडियो सिर्जनाकर्ताहरूको लागि अडियो स्ट्रिमि destination गन्तव्य, र जो कोही अडियो सुन्न मनपराउँछ। हामी हाम्रो स्टेशन मोडेल मार्फत अडियो सिर्जनाकर्ताहरूलाई समर्थन गर्दछौं र श्रोताहरूलाई सुन्न अर्थपूर्ण सामग्रीसँग जडान गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईंको Vurbl स्टेशन दावी गर्नुहोस्
सामाजिक मिडियामा अडियोग्रामहरू साझेदारी गर्नुहोस्
अडियोग्राम - तपाईंको अडियोलाई आकर्षक सामाजिक भिडियोहरूसँग आकर्षक बनाउनुहोस् अडियोग्राम.
हेडलाइनर - वेभफर्म अडियोग्रामहरू, भिडियोमा पूर्ण एपिसोडहरू सिर्जना गर्नुहोस्, स्वचालित रूपमा ट्रान्सक्राइब गर्नुहोस्, र तपाईंको पोडकास्ट प्रचार गर्नुहोस् धेरै भिडियोहरूको साथ तपाईं चाहानुहुन्छ हेडलाइनर.
Wavve - Wavve तपाईलाई अडियोग्रामहरू सिर्जना गर्न सक्षम गर्दछ - तपाईंको पोडकास्ट अडियोको साथ भिडियोहरू - जुन तिनीहरूको प्लेयर प्रयोग गरेर सामाजिक साझेदारी गर्न सकिन्छ।
कसरी तपाईंको पोडकास्टलाई अनुकूलित गर्ने
के तपाईंलाई थाहा छ गुगल अब पोडकास्ट अनुक्रमणिका गर्छ र खोज ईन्जिन परिणाम पृष्ठहरूमा क्यारोजेलमा उनीहरू प्रदर्शन गर्दछ? गुगलले चरणहरूमा विवरण प्रदान गर्दछ निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको पोडकास्ट अनुक्रमित छ तिनीहरूको समर्थन लेखमा। मैले यो लेखेको छु कि कसरी Google लाई यो जान्न सुनिश्चित गर्न सकिन्छ कि तपाईंसँग पोडकास्ट छ भने WordPress तर बाह्य पोडकास्टमा पोडकास्टलाई होस्ट गर्दैछ होस्टिंग सेवा।
पोडकास्ट स्मार्ट ब्यानर थप्नुहोस्
आईओएस उपकरणहरू तपाईंको पोडकास्ट हेर्न, पोडकास्ट अनुप्रयोगमा खोल्न, र यसलाई सदस्यता लिन एप्पल आईफोन प्रयोगकर्ताहरूको लागि तपाईंको वेबसाइटको शीर्षमा स्मार्ट ब्यानर थप्न सक्ने क्षमता छ। तपाईं कसरी यस लेखमा यो गर्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ पोडकास्टहरूको लागि आईट्यून्स स्मार्ट ब्यानरहरू.
त्यहाँ केही सशुल्क डाइरेक्टरीहरू छन् जुन तपाईं पोडकास्टलाई होस्ट गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ वा केवल अर्को डाइरेक्टरीको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। जबकि तपाईं यी केहि को लागि तिर्न हिचकिचाई हुन सक्छ, तपाईं कहिले थाहा छैन तपाईंको दर्शक कहाँ सुन्दैछ। म तिनीहरूलाई कम्तिमा एक वर्ष को लागी सबै प्रयास गरी सिफारिस गर्दछु र रद्द गर्न अघि तपाईं यी डाइरेक्टरीहरूबाट कस्तो प्रकारको तथ्या .्कहरू पाउनुहुन्छ भनेर हेर्नुहोस्। यी मध्ये धेरै नि: शुल्क खाताको साथ सुरू हुन्छ, तर तपाईं चाँडै आफ्नो नि: शुल्क खातामा ठाउँको बाहिर चलाउनु हुन्छ।
Acast - Acast तपाइँको पोडकास्ट जताततै सिर्जना गर्न र साझेदारी गर्न आवश्यक सबै चीज प्रदान गर्दछ।
अडियोबूम - अडियोबूम पोडकास्टर्सलाई तपाईंको अडियो होस्ट, वितरण र मुद्रीकरण गर्न सक्षम गर्दछ।
पोडबीन - पोडबीन Spreaker लाई पोडकास्ट होस्टको रूपमा धेरै मिल्दो छ। हाम्रो अनुभवमा, हाम्रो आरएसएस फिडको आयातमा मुद्दाहरू छन् जुन यो सँधै पछिल्ला एपिसोडहरू प्राप्त गर्दैन। तर अझै, पोडकास्टरहरू बीच यो एक धेरै लोकप्रिय होस्ट हो।
पोडसर्च - पोडसर्चले तपाईलाई मनपर्ने पोडकास्टहरू फेला पार्न मद्दतको लागि कोटीहरू, शीर्ष कार्यक्रमहरू, नयाँ कार्यक्रमहरू, र कीवर्डहरू सहित प्रयोग-गर्न-सजिलो खोज उपकरणहरू प्रदान गर्दछ। यहाँ दर्ता गर्नुहोस्.
साउन्डक्लाउड - SoundCloud वेब रेडियोको एज एक नयाँ डाइरेक्टरी हो जुन हाम्रो लिब्सिन खातासँग छ र हामी स्वचालित रूपमा दुबैलाई सिnc्क गर्न सक्षम भएका छौं र लिब्सिन मार्फत खाताको निर्माण एकदम सरल थियो।
Spreaker - Spreaker एक लोकप्रिय होस्ट हो, विशेष गरी लाइभ प्रसारण गर्न चाहने पोडकास्टरहरू बीच। तिनीहरूसँग एक राम्रो खेलाडी छ जसले तपाईंलाई प्रत्यक्ष स्ट्रिमिंग गर्न दिनेछ साथै प्रत्यक्ष प्रसारण छुटेकाहरूको लागि प्रत्येक एपिसोडको अभिलेख राख्नेछ।
म निश्चित छु कि त्यहाँ अरुहरु छन् तर यी डाइरेक्टरीहरु हुन् जुन हामी प्रयोग गर्छौं हाम्रो पोडकास्ट उत्पादन ग्राहकहरूको लागि एज मिडिया स्टुडियोहरू। यदि तपाईंसँग मैले अरू खोलेको छु भने, मलाई तल टिप्पणीहरूमा अवश्य थाहा दिनुहोस्!
पोडकास्ट वेब प्लेयरहरू
WordPress पोडकास्ट साइडबार विजेट - जहाँ तपाईंको पोडकास्ट होस्ट गरिएको छ, तपाईंको साइटमा थपेमा केही सान्दर्भिक श्रोताहरू प्राप्त गर्ने उत्तम तरिका हो। वर्डप्रेस पोडकास्ट साइडबारले दुबै विजेट वा शर्टकोडलाई तपाईंको सम्पूर्ण पोडकास्ट फिड (प्लेयर सहित) तपाईंको साइटमा कहिँ पनि इम्बेड गर्न अनुमति दिन्छ।
jetpack - WordPress 'प्रीमियर प्लगइन तपाईंको साइट बढाउनको लागि अब पोडकास्ट ब्लक छ तपाईंको सामग्रीमा थप गर्न सक्नुहुन्छ जुन स्वचालित रूपमा पोडकास्ट प्लेयर सिर्जना गर्दछ।
यहाँ केहि अतिरिक्त भुक्तान गरिएको प्लगइनहरू छन् जुन तपाईंको पोडकास्टहरू वर्डप्रेस भित्र राम्ररी प्रदर्शन गर्दछ।
एमपी3स्टिकी प्लेयर WordPress प्लगइन
रोयल अडियो प्लेयर वर्डप्रेस प्लगइन
HTML5 अडियो प्लेयर वर्डप्रेस प्लगइन्स बन्डल
सजिलो अडियो प्लेयर वर्डप्रेस प्लगइन
Sonaar एमपी3प्लेयर WordPress प्लगइन
नयाँ र पुरानो दुबै, तपाईंको पोडकास्टहरू प्रबर्धन गर्न सोशल मिडियाले खेल्न सक्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका नबिर्सनुहोस्! ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इन्स्टाग्राम… गुगल + समेत सबैले तपाईंलाई तपाईंको दर्शक बढाउन र तपाईंको सामग्रीको लागि अधिक सुन्न र ग्राहकहरू ड्राइभ गर्न मद्दत गर्दछ।
एक सामाजिक मिडिया प्रबन्धन उपकरणको साथ जस्तै Agorapulse, तपाईं सजिलैसँग ती प्रोफाइलहरूमा सबै शेयरहरू लामबद्ध गर्न सक्नुहुनेछ, साथै ती पोडकास्टहरूका लागि आवर्ती शेयरहरू सेट अप गर्नुहोस् जुन तपाईं सदाबहार मान्न सक्नुहुन्छ। वा, यदि तपाईं एक उपकरण जस्तै प्रयोग गर्नुहुन्छ फिडप्रेस, तपाईं स्वचालित रूपमा तपाईंको सोशल मीडिया प्रोफाइलहरूमा तपाईंको पोडकास्ट प्रकाशित गर्न सक्नुहुनेछ।
जसै तपाईं ती प्लेटफर्महरूमा तपाईंको दर्शक बढ्नुहुन्छ, नयाँ फ्यानहरूले तपाईंको पुरानो पोडकास्टहरू नदेखेका हुन सक्छन्, त्यसैले यो दृश्यता वृद्धि गर्ने उत्तम तरिका हो। कुञ्जी भनेको सामाजिक मिडिया पोष्टहरू सिर्जना गर्ने हो जुन तपाईंको पोडकास्ट शीर्षकको प्रसारणको सट्टा व्यस्त छन्। प्रश्नहरू सोध्ने वा प्रमुख टेकवेहरू सूचीबद्ध गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। र यदि तपाइँ अन्तर्वार्ता लिनुभयो वा अर्को ब्रान्ड वा प्रभावकर्ता उल्लेख गर्नुभयो भने, तपाइँको सामाजिक शेयरमा तिनीहरूलाई ट्याग गर्न नबिर्सनुहोस्!
प्रकटीकरण: म धेरै उत्पादनहरूको लागि यो पोस्ट भर सम्बद्ध लिङ्कहरू प्रयोग गर्दैछु।
टैग: एक्स्टअमेज़न संगीतकुनै पनि पोडअडियोबूमBlubrryकास्टबक्सcastroकिनारा मिडियाएज मीडिया स्टुडियोएपोड निर्देशिकागुगल प्लेiheartradioItunesjetpacklibsynमार्केटिंग पोडकास्टmartech साक्षात्कारPodbeanपोडकास्ट निर्देशिकाहरूपोडकास्ट डाइरेक्टरीपोडकास्ट फिडपोडकास्ट होस्टिंगपोडकास्ट मेट्रिक्सपोडकास्ट पदोन्नतिपोडकास्ट सिन्डिकेशनपोडकास्टिङपोडचेसरपोडनाइफप्रस्तुतिSoundCloudSpotifyspreakerस्टिचरतपाईंको पोडकास्ट बुझाउनुहोस्सिन्डिकेशनट्यूनिनभर्बललहरजहाँ होस्ट गर्नेजहाँ प्रचार गर्नकहाँ सिन्डिकेट गर्नWordPress
टम ब्रोडबेक वरिष्ठ डिजिटल रणनीतिकार र डिजिटल टोली लीग हीरन्स मा हुन्, इंडियानापोलिस मा एक पूर्ण सेवा मार्केटिंग एजेंसी। उसको अनुभव एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट मार्केटिंग, र अडियो / भिडियो उत्पादन वरिपरि केन्द्रित भएको छ। उनी सोशल मिडिया टुडे र सर्च इञ्जिन जर्नलमा पनि प्रस्तुत भएका छन्।
हेडलाइनर: सामाजिक रूपमा प्रचार गर्न तपाईंको पोडकास्टको लागि अडियोग्रामहरू बनाउनुहोस्